Laurent Koscielny oo hadlay kaddib markii uu OOYIN ku jabsaday kulan ay yeesheen kooxda Arsenal – Gool FM
Laurent Koscielny oo hadlay kaddib markii uu OOYIN ku jabsaday kulan ay yeesheen kooxda Arsenal
Kaafi March 5, 2018
(London) 05 Mar 2018. Laurent Koscielny waxa uu ugu baaqay koox wadaagyadiisa in ay wadajiraan kaddib waji xumadii ka soo gaartay afartii guuldarro oo xiriir ahayd.
Dhinaca Arsene Wenger waxaa isu raacay laba jeer oo ay si xiriir ah u garacday Manchester City iyo bandhiggii liitay ee Brighton.
Koscielny waxa uu ooyin jabsay markii la hadlayey saaxiibadiis kulankii ay guuldaradda 3-0 kala kulmeen fiinaalihii Carabao Cup balse soo baryadiisii waxa ay u muuqataa mid dhago awdan ku dhacday.
City waxa ay mar kale ku jiidday 3-0 waxaana u xigay 2-1kii Brighton.
Natiijooyinkaas waxa ay ka dhigan tahay in Wenger u dagaalamayo bad baadinta shaqadiisa iyo taariikhdiisa kooxda halka Koscielny uu baaq cabasho u diray ciyaaryahanada Arsenal iyo taageereyaasha. “Waan ognahay xaalad xun ayaan ku jirnaa, waqti xun,” ayuu yiri.
“Waan isku daynay laakiin waxba nalama jiraan. Waxaan isku daynay in aan ku dagaallano Amex Stadium oo aan ciyaarno kubadd laakiin waxaan arki karnay in kalsoonidii hoos aaday.
“Si tartiib ah ayey u soo noqon doontaa. Waa waqti xun laakiin waxaan u baahannahay qof kasta oo kooxdan ka mida – ciyaaryahanada, shaqaalaha iyo jamaahiirta in ay wadajiraan oo ay u daggaalamaan siidii heerka ugu sarreeya ee aan awoodno ku joogi lahayn.
“Aad ayey u adag tahay laakiin kubadda cagta waa sidan oo kale. Hadda waxaad diiradda saareysaa kulanka xiga, si wacan ayaad isu diyaarineysaa. Waxaad u baahan tahay in aad madaxaaga dhulka dhigto oo aad shaqeyso.
“Aad ayey u adkaan doontaa in lagu dhammeysto afarta sare. Waqti xun ayaa na soo maray, ma helin natiijooyinkii aan u baahneyn.
“Waxaan luminay kalsoonideena xoogaa, garoonka kuma lihin kasoonidii aan xooggaa riixii lahayn nafsadeena si aan u ciyaarno kubadda.
“Isku dhiibyo badan ayaan luminay laakiin waxaan u baahannahay in aan wadajirno. Waxaan u baahannahayin aan badino si aan u helno xoriyadda gegida waxaana u baahannahay in aan wadajirno. Waa muhiim in qof walba joogo garabkeena.”
Milkiilaha Milan Mr Li & macallinkii hore ee Fatih Terim oo saaka booqday Milanello + Sawirro
''Carruur sida Astori muhim u ah ayaa maalin walba la dilaa laakiin dan lagama laha'' - Dani Alves oo dood dhaliyay!